कैलालीमा सिकलसेलवाट २ महिलाको मुत्यु |
कैलालीमा सिकलसेलवाट २ महिलाको मुत्यु
६८ जनाको निःशुल्क उपचार हुँदै
प्रकाशित मिति :2015-08-06 10:11:35
धनगढी, साउन २१। महेन्द्रनगर ८ की सविना चौधरीलाई गत जेठमा अनौठो रोगले सतायो। उनको हातखुट्टा नचल्ने समस्या भयो। प्यारालाइसिस जस्तो लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पतालमा ल्याएको २ दिनमै उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो। १८ वर्षीया सविनाको मृत्युको कारण सिकलसेल भएको पछि पत्ता लाग्यो।
उनी जस्तै कैलालीको उर्मा निवासी संजिता चौधरीको मृत्युको कारण पनि सिकलसेल नै बन्यो। सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी संजितालाई विरामी अवस्थामा सुत्केरी व्यथा लागेपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रेफर गरिएको थियो। गत जेठ ८ गते उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो। उनीसँगै उनको गर्भमा रहेको ९ महिनाको बच्चा पनि खेर गयो।
सविना र संजिता जस्तै कैलालीमा सिकलसेल रोगबाट ४ जनाको मुत्यु भइसकेको छ। सेती अञ्चल अस्पताका सिकलसेल सेलका संयोजक डा.सुवेसराज कायस्थका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ सेती अञ्चलमा आएका सिकसेलका विरामीमध्ये २ महिला २ पुरुषको मृत्यु भएको हो। सिकलसेल थारु समुदायमामात्र देखिएको छ।
सिकलसेल लागेका विरामीले नियमित औषधी सेवन गरेमा पुरुष ४२ र महिला ४८ वर्षसम्म बाँच्न सक्ने डा.कायस्थको भनाई छ।
‘कैलालीमा सिकलसेलका विरामी कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङक छैन’ डा. कायस्थले भन्नुभयाे –थारू समुदायका हजारौं व्यक्ति सिकलसेलबाट प्रभावित छन्। यसबारे अध्ययन र तथ्याङ्क संकलन कसैले गरेका छैनन्।’
यो रोग लागेपछि मानिसको शरीरमा रहेका हँसिया आकारका रक्तकोषिकाहरू छिटोछिटो नष्ट हुने चिकित्सक बताउँछन्। यस्तो हुँदा बिरामीलाई सधैं रगतको अभाव (एनिमिया) भइरहन्छ। यसले फोक्सोको संक्रमण, गर्भपतन, हाड सम्बन्धी रोग, पित्ताशयमा पत्थरी, फियो वृद्धि जस्ता समस्या हुने डा. कायस्थका बताउँनुहुन्छ।
‘यो रोग २० देखि ३० वर्ष उमेरसमूहका मानिसमा बढी देखिने गरेको छ। सामान्य अवस्थामा यो लाल रक्तकोषको गोलो आकारमा देखिन्छ। विस्तारै हसियाँ आकारमा देखिएपछि रक्तसञ्चारमा समस्या देखिन्छ’ डा. कायस्थले भन्नुभयो।उहाँले आमाबाबुमा देखिएमा सन्तानमा सर्ने सम्भावना २५ प्रतिशत रहने जानकारी दिनुभयो। यो रोगको संक्रमणले विरामीलाई निकै पीडा दिने गर्छ।
सेती अञ्चल अस्पतालकी नर्सिङ अधिकृत तथा सिकलसेलकी प्रवक्ता यशोदा ढकालले नेपाल सरकारले प्रदान गरेको सेवावाट अहिले ६८ जनाले निःशुल्क सेवा लिरहेका छन्। सरकारले सिकलसेल लागेका विरामीलाई १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधी उपचारको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेती अञ्चल अस्पतालमा आएका विरामीमा परीक्षण गर्दा १ सय ३० जनामा सिकसेल भएको पाइएको वताएको छ।